Man United Oo Si Gaar Ah Indhaha Ugu Haysa Daafac Ka Xamaasha Premier League & Heshiiska Uu Kula Jiro Kooxdiisa Haatan Oo Xiiso Galinaya – Kooxda.com
Home 2018 February Ingiriiska, Wararka Maanta Man United Oo Si Gaar Ah Indhaha Ugu Haysa Daafac Ka Xamaasha Premier League & Heshiiska Uu Kula Jiro Kooxdiisa Haatan Oo Xiiso Galinaya
Man United Oo Si Gaar Ah Indhaha Ugu Haysa Daafac Ka Xamaasha Premier League & Heshiiska Uu Kula Jiro Kooxdiisa Haatan Oo Xiiso Galinaya
Kooxda Man United ayaa isku diyaarinaysa in ay si weyn u xoojiso daafaceeda dhamaadka xilli ciyaareedkan kadib qaab ciyaareed niyad jab leh oo ay soo bandhigeen daafacyadeeda haatan xilli ciyaareedkan oo uu ugu dambeeyay qaab ciyaareedkii keenay in ay Newcastle 1/0 uga badiso Axadii kulan ka tirsanaa horyaalka premier league.
Kooxda Man United ayaa lagu soo waramayaa in ay si gaar ah indhaha ugu hayn doonto xaalada daafaca kooxda Tottenham ee Tony Alderweireld.
Kooxda.com ayaa saaka idiin soo gudbisay in uu Jose Mourinho isku diyaarinayo in uu xagaaga isku shaandhayn weyn ku samayn doono daafaciisa isaga oo kooxda ka diri doona daafacyada reer England ee Chris Smalling Iyo Phil Jones.
Daafacyada Raphael Varane & Harry Maguire ayaa ah xiddigaha diirada u saaran United isaga oo diyaar u ah in ay lacag badan galiso daafaca sida kooxda ay jaarka yihiin ee Man City.
Wargayska Manchester Evening News yaa haatan sheegaya in ay United la socoto xaalada Alderweireld kaas oo 18 bilood oo kaliya uga hareen heshiiskiisa United.
Heshiiskiisa ayuu ku jiraa hal sano oo dookh ah oo lagu kordhin karo kaas oo la dhaqan galin karo xagaaga 2019 si kasta ha ahaatee heshiiskiisa ayaa lagu bur-burin karaa lacag dhan 25 milyan oo euro xagaaga 2019 gaar ahaan iyada oo 14 maalmood ka harsan yihiin maalinta ugu dambaysay suuqa kala iibsiga.
Inkastoo Jose Mourinho uu muhiimad gaar ah siin doono saxiix khadka dhexe ah hadana waxa la fahamsanyahay in heshiiska Alderweireld uu xiiso galinyo kooxda Man United maadama ay sidoo kale daafac dhexe doonayso.